အိုလီဗာဘလက်ဘန်းကသူ၏လက်ရာ "Kristy" ကိုလန်ဒန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော် iHorror တွင်ပြသခဲ့သည်
ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း အိုလီဗာဘလက်ဘန်းသည်သူ၏လက်ရာ“ Kristy” ကိုလန်ဒန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပြသခဲ့သည်
အိုလီဗာဘလက်ဘန်းသည်သူ၏လက်ရာ“ Kristy” ကိုလန်ဒန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင်ပြသခဲ့သည်
by admin ရဲ့ အောက်တိုဘာလ 20, 2014
ကရေးသား admin ရဲ့ အောက်တိုဘာလ 20, 2014
မကြာသေးမီက iHorror.com သည် Oliver Blackburn ၏ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသော slasher ရုပ်ရှင်“ Kristy” ၏ ၀ န်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဖိတ်ကြားခံရခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်။ ငါလမ်းလျှောက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကံကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
လက်မှတ်တွေကိုဝက်ဘ်ဆိုက်မှာရောင်းနေပေမဲ့ထိုင်ခုံတွေများလွန်းနေတယ်။ ၀ န်ကြီးချုပ်ကိုတတ်နိုင်သမျှရင့်ကျက်မှုရှိအောင်တမင်ရည်ရွယ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ Olly ၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုဝင်များသည်သူ၏အကြီးမားဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်သူ့ကိုကူညီပံ့ပိုးရန်လာကြခြင်းမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကဘာရုပ်ရှင်လဲ။ သူ၏“ ဗြိတိသျှ၊ gritty၊ indie” မြင်ကွင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးခံစားပြီးနောက်“ မြည်းထိုးခြင်း” ၂၅ ရက်အတွင်းတွင်ရိုက်ကူးခဲ့သောသူ၏အလုပ်သစ်အတွက်ကျွန်ုပ်အမြင်အာရုံမြင့်မားခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်သွားကြည့်သူအားလုံးသည်မကောင်းသောအကြံအစည်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ဒါရိုက်တာနှင့်သူတို့၏နောက်ခံအကြောင်းအဘယ်အရာကိုမျှမသိသောအခါရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းဖြင့်ရရှိသောပျော်ရွှင်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ Olly ၏အလုပ်သည်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကိုစွဲမှတ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာတွင်ကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုခဲ့သောအကောင်းဆုံး slasher ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ “ Collector” နှင့်“ Scream” စသည့်ရုပ်ရှင်များမှ element များကိုပေါင်းစပ်။ သင်မြင်ရမည့်ရုပ်ရှင်ရုံစာရင်းကိုအမှန်ပင်ထည့်သွင်းသင့်သည်။
အိုလီဗာသည်မိမိကိုယ်ကိုရုပ်ရှင်၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ သူသည်နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့သောအနီးအနားရှိဒေသခံ Scarlett ရုပ်ပုံအိမ်ရှိရုပ်ရှင်ရုံကိုသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောမြို့တွင်ရှိနေသည်ဟုထောက်ပြသည်။ Olly ၏သူရွေးချယ်ထားသည့်အလုပ်ကိုနှစ်သက်ကြောင်းသင်အလွယ်တကူခံစားမိနိုင်သည်။ သူသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော၊ နားထောင်ရန်လည်းပျော်သည်။ ပရိသတ်ကိုတတ်နိုင်သမျှများများနှင့်မျက်လုံးချင်းဆုံပုံရသည်။ သူ၏နိဒါန်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာကြာပြီး၊ နိဂုံးချုပ်ခါနီးတွင်ရုပ်ရှင်သည်နိဂုံးချုပ်မည်မဟုတ်သောကြောင့်ခရက်ဒစ်၏အဆုံးကိုဆက်ကြည့်ရှုရန်ပြောခဲ့သည်။ ဒါကကျွန်မကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့တယ်။ ငါရုပ်ရှင်ရဲ့အဆုံးမှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်အပိုရိုက်ကူးနည်းနည်းကြည့်ဖို့နှစ်သက်ခြင်းနှင့်အခြားသူများလွဲချော်စေခြင်းငှါအရာတစ်ခုခုကိုမျက်မြင်ဖြစ်နိုင်သည်။
အသံအတိုးအကျယ်တက်လာပြီးဖွင့်ခရက်ဒစ်၏ပထမနှစ်မိနစ်အတွင်းကျွန်ုပ်ဘာဖြစ်မည်ကိုသိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် resolution နိမ့်ပြီးအွန်လိုင်းစတိုင်ဗီဒီယိုဖြင့်ရက်ရက်စက်စက်တိုက်ခိုက်ခံရခြင်း၊ အသတ်ခံရခြင်းနှင့်အတူအရိုးနှင့်နီးကပ်နေသည့်အရာတစ်ခုခုကိုတွေ့မြင်ရန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ချက်ချင်းခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်သူမအားတိုက်ခိုက်သူများကယခုအသက်မဲ့အမျိုးသမီး၏အလောင်းကိုသစ်တောနယ်မြေတွင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးမည်သည့်အရာမျှနောင်တမရခဲ့ပါ။ ဒီနောက်မှ, သတ်ဖြတ်မှု၏ရည်ရွယ်ချက်သို့လိမ္မာပါးနပ်ထိုးထွင်းသိမြင်ရှိ၏ Kill Kristy ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကိုမြှင့်တင်တဲ့အစွန်းရောက်တွေရဲ့အွန်လိုင်းစုဆောင်းမှု။ ကျွန်ုပ်၏သုတေသနကသရုပ်ဆောင်ရာတွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှ Kristy ဟူသောဇာတ်ကောင်ကိုတီးခတ်နေခြင်းမရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ နိဒါန်းမြင်ကွင်းများက Kristy သည်ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏နောက်လိုက်များအားပေးသောနာမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြသောအခါရုပ်ရှင်သည်ရှင်းပြရန်မလိုအပ်တော့ဘဲကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါ့ထိုင်ခုံနှင့်သရုပ်ဆောင်ရဲ့ဖျော်ဖြေပွဲပျော်မွေ့။
၎င်းသည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသောရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးအလွန်များပြားသောမြန်ဆန်စွာသောအချိန်များဖြစ်သော်လည်းလိုအပ်သောအချိန်များဖြစ်သည်။ အားလုံးကြောက်မက်ဖွယ်အတူတကွစီးဆင်းပုံရသည်အဖြစ်ငါအချည်းနှီးသောကြောက်လန့်မှာငါ့မျက်စိလှိမ့်တွေ့ဘယ်တော့မှမ။ ဒါဟာထိပ်တန်း gory ကျော်မဟုတ်ခဲ့, ဤသူသည်သတိဆုံးဖြတ်ချက်ခဲ့ကြောင်း Olly ကိုယ်တော်တိုင်အားဖြင့်ပြောတယ်။ ငါကတော့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အစာစားချင်စိတ်ကိုဖြုန်းတီးဖို့သွေးတွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတယ်။
Haley Bennett က အက်ရှလေဂရင်း ခရစ် Coy
ပုံများ IMDB.com ၏ယဉ်ကျေး
သူမ၏ဇာတ်ကောင်သည်သူမ၏ဗလာကျင်းတက္ကသိုလ်ဝန်းကျင်တစ်လျှောက် Kristy-kill hooligans မှလိုက်လံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသောကြောင့်ရုပ်ရှင်သည် Haley Bennett မှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ Haley ဟာသားကောင်ကိုတောက်ပစွာဖော်ကျူးထားပြီးသင်ဟာလူတစ် ဦး ကိုအလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုနဲ့ကြည့်နေတယ်ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါဘူး။ သူမအလွန်အကျွံအကုန်အကျမခံဘဲအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုသို့ရောက်သောအခါသူမသည်ကိစ္စရပ်များကိုချိုဖြင့်ကိုင်တွယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးမြည်းကိုစတင်ကန်လေသည်။ Glen Packard ၏အကောင်းဆုံးမကောင်းသောမြည်းသည် Ass Final Final မိန်းကလေးများ.
နာမည်ကြီးအက်ရှလေဂရင်းသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားနှစ်ကားကိုမစိမ်းပါ၊ သို့သော်သာမန်အားဖြင့်ချိုသာပြီးအပြစ်မဲ့သည့်မိန်းကလေးအားလိင်ဆွဲဆောင်မှုအားဖြင့်သရုပ်ဆောင်သည်။ ဒီရုပ်ရှင်မှာတော့သူမကသူမရဲ့စစ်မှန်တဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုတွေ့ပြီးပါးနပ်စွာထိုးနှက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဦး ခေါင်းဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့မြည်းကလေးတစ်ကောင်ကစားနေပါတယ်။ သူမဟာအံ့သြစရာကောင်းပြီး Olly ရဲ့စကားအရသူမရဲ့အခန်းကဏ္ingကိုမမောနိုင်မပန်းနိုင်သုတေသနပြုခြင်းအားဖြင့်သူမအလုပ်ကိုများစွာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သူမ၏ဇာတ်ကောင်အတွက်နောက်ကြောင်းပြန်ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်သူမသည်အခွင့်ထူးခံများကိုမုန်းတီးပြီးအတော်လေးတောက်ပသောအရာတစ်ခုကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။
Olly အနေဖြင့်လူကြမ်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည့်သရုပ်ဆောင်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိစေရန်အလုပ်အပြင်ဘက်တွင်တွယ်ကပ်နေတတ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ အက်ရှလေသည်သူကိုယ်တိုင်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သည့်အတွက်“ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် -In- ရာဇ ၀ တ်မှု” မြင်ကွင်းကိုသူပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီခဲ့သည့် Chris Coy နှင့်နီးကပ်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုသူသည် Walking Dead ဇာတ်ကားတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးရာသီ ၅ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၁ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ပြသခြင်းခံရသည်။
အိုလီဗာဘလက်ဘန်းနှင့်အတူရုပ်ရှင် Q & A ပြီးနောက်
ဖြစ်ရပ်၏အိမ်ရှင်သည်မေးခွန်းများအတွက်အချိန်သိပ်မပေးခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်ခုကိုသာမေးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်စကားလက်ဆုံပြောဆိုရေးကိုရေးမယ့်အစား၊ အသံဖိုင်ကိုတင်မယ်၊ မင်းကိုယ်တိုင်နားထောင်ပေးမယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ်။ ညံ့ဖျင်းသောအသံဖမ်းခြင်းနှင့်တောက်ပနေသောလမ်းတစ်ဝက်အတွက်ဝမ်းနည်းပါသည်။ Olly သည်လူမီနီယံသတ္တုပါး၏အခန်းကဏ္ several များစွာကိုယူဆောင်လာပြီး Kristy Masks ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အိုလီဗာဘလက်ဘန်းသည်နိဒါန်းတွင် အိုလီဗာဘလက်ဘန်းနှင့်လန်ဒန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၏တင်ဆက်သူ ငါနဲ့အိုလီဗာဘလက်ဘန်း (Olly ရိုက်ချက်အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေး)
ငါနဲ့အိုလီဗာဘလက်ဘန်း (ငါရိုက်ချက်အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး) Olly ငါလုပ်မျက်နှာဖုံးထားရန်ကြိုးစားနေသည်။ Olly အဆိုပါမျက်နှာဖုံးဝတ်ထား။
အက်ရှလေဂရင်းခရစ် CoyHaley Bennett ကနေအိမ်kristyနောက်ဆုံးလန်ဒန်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်အိုလီဗာဘလက်ဘန်းမကြာသေးမီ
SyFy ၏လာမည့် Sequel 'Sharknado 3' အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များဖော်ပြခဲ့သည်
Michael Myers သည်လူသတ်သမားလူရွှင်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည်ကိုသင်သိပါသလား?!
Cateories Browse Category ေရြးပါ အမေဇုံ (ရုပ်ရှင်) (7) အမေဇုံ (စီးရီး) (8) AppleTV + (1) Blu Rays (3) ဟာသကြောက်မက်ဖွယ် (46) ရုပ်ပြများ (11) ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် (စီးရီး) (၁) စိတ်ကူးယဉ် (30) တွေ့ရှိထားသည့်ဗီဒီယိုများ (26) ဂေါ (23) HBO (ရုပ်ရှင်များ) (4) HBO (စီးရီး) (၅) ထိတ်လန့်စာအုပ်များ (42) ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း (10,383) ထိတ်လန့်ရုပ်ရှင် (155) ထိတ်လန့်စီးရီး (46) ထိတ်လန့် Subgenres (8) ဟူးလူ (စီးရီး) (4) အင်တာဗျူးများ (ရုပ်ရှင်) (၂၅) အင်တာဗျူးများ (စီးရီး) (၁) LGBTQ ထိတ်လန့် (29) စာရင်း (ရုပ်ရှင်) (35) စာရင်း (စီးရီး) (၁) ဈေး (19) နဂါးထိတ်လန့် (9) ရုပ်ရှင်သုံးသပ်ချက်များ (37) ရုပ်ရှင် (11) ဂီတ (32) Netflix (ရုပ်ရှင်) (12) Netflix (စီးရီး) (20) စိတ်ကူးယဉ် (3) Paranormal (75) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသော (52) စီးရီးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း (5) Shudder (ရုပ်ရှင်) (၂၆) Shudder (စီးရီး) (၆) slasher (4) ထူးဆန်းပြီးပုံမှန်မဟုတ်သော (35) အစီအစဉ်များ (45) streaming များစီးရီး (15) ကစားစရာများ (2) နောက်တွဲယာဉ် (ရုပ်ရှင်) (115) နောက်တွဲယာဉ် (စီးရီး) (31) စစ်မှန်သောရာဇဝတ်မှု (41) ဗီဒီယိုဂိမ်းများ (163) \_ t ယူကျု (ရုပ်ရှင်) (၂) ယူကေ (စီးရီး) (၁၀)